Maxay yihiin Faa'iidooyinka aan ka heli karno Kaabista PEA?
Palmitoylethanolamide (PEA) guudmar
Waxaa jira warbixin la soo sheegay oo ah in Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ay ogolaadeen inay soo gudbiyaan codsi tijaabo caafimaad ah si loogu daaweeyo COVID-19 iyadoo la adeegsanayo dawo dabiici ah oo u ekeysiinaysa ficil u mekulka laga helay marijuana.
Daawada synthetic, oo loo yaqaan 'ultramronizedzed palmitoylethanolamide' (micro PEA), ayaa la rumeysan yahay inay u dhaqmeyso sidii anti-bararka. Palmitoylethanolamide (PEA) waa "aashito dufan dabiici ah" oo la mid ah endocannabinoid, oo ah mid ka mid ah unugyada molecules ee laga helo xashiishka ee bartilmaameedsada kuwa soo dhaweynaya CB2. Daaweeyeyaasha CB2 waxaa loo maleynayaa inay wax ka beddelaan caabuqa iyo xanuunka jirka aadanaha oo dhan.
Maaddaama [micro PEA] laga isticmaali jiray Yurub muddo 20 sano ah, qaar ka mid ah bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka ee talyaanigu waxay u doodayeen adeegsiga micro PEA si loogu daaweeyo bukaanada COVID-19 waxayna heleen guullo qaarkood.
Daran daran COVID-19 waxaa lagu gartaa jawaab celin xamaasad badan oo keeni karta duufaan cytokine ah. “Micro PEA ma ahan dilaa virus, laakiin waxay rumeysan yihiin inay yareyn karto jawaab celinta difaaca jirka, oo noqon karta mid dilaa ah.
Waa maxay Palmitoylethanolamide (PEA)?
Palmitoylethanolamide (PEA) waa laf-dhabarta ku dhacda si dabiici ahaan jirkeenna uga mid ah qaybta loo yaqaan 'acids amide acids fat'. Sidaa awgeed waa lipid endogenous. PEA sidoo kale si dabiici ah ayaa loo soo saaray dhirta iyo xayawaanka.
Palmitoylethanolamide (PEA) waxaa laga heli karaa cuntada sida caanaha, digirta soy, digirta beerta, soy lecithin, hilibka, ukunta iyo looska.
Ku guuleystaha abaalmarinta Nobel Prize Levi-Montalcini wuxuu u aqoonsaday Palmitoylethanolamide (PEA) inuu yahay mekole si dabiici ah u dhaca, isagoo ku sifeynaya qiimaha ay u leedahay daweynta cudurada joogtada ah iyo xanuunka. Ka dib markii la helay, boqolaal daraasadood oo cilmiyaysan ayaa la sameeyay si loo muujiyo inay waxtar badan leedahay oo la isticmaali karo. Palmitoylethanolamide (PEA) waxaa lagu sharaxay qoraalada sayniska a xanuun joojiye dabiici ah.
Phcoker waa soo saare xirfadle ah soosaarka budada Palmitoylethanolamide (PEA)
Palmitoylethanolamide faa'iidooyinka - Maxaa loo adeegsadaa Palmitoylethanolamide?
Palmitoylethanolamide (PEA) waa amide fatty acid amide waana la sameeyaa oo laga sameeyaa gudaha jirkeena si loo xakameeyo shaqooyinka kala duwan. Waa amide aashito dufan leh, oo ka tirsan fasalka agonistayaasha walxaha nukliyeerka. Palmitoylethanolamide (PEA) ayaa dhab ahaantii si ballaaran loogu soo helay noocyo badan oo xayawaan xayawaan ah, oo ay weheliyaan dhowr baaritaan caafimaad.
Waa xanuun baabi'iye dabiici ah waxaana loo isticmaali karaa xanuun joogto ah iyo caabuq. Waxay sidoo kale sameysaa saameyn kale oo faa'iido leh sida xanuunka neuropathic, fibromyalgia, dhowr sclerosis, dhaawac soo noqnoqda oo soo noqnoqda, infekshinka marinka neefta, iyo xanuuno kale oo badan.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka la soo sheegay ee palmitoylethanolamide waxaa ka mid ah;
aniga. Waxay taageertaa caafimaadka maskaxda
Faa'iidooyinka Palmitoylethanolamide ee kor u qaadida caafimaadka maskaxda waxay la xiriirtaa awooddeeda ay kula dagaallanto caabuqa neerfaha iyo sidoo kale kor u qaadista unugyada neural-ka. Tan waxaa lagu xusay inbadan oo ah dadka qaba xanuunada neerfaha iyo faaligga.
Tusaale ahaan, daraasad lagu sameeyay 250 qof oo la ildaran istaroog, kaabbadda Palmitoylethanolamide ee la socota iyo luteolin ayaa la ogaaday inay xoojineyso soo kabashada. PEA waxaa laga helay kor u qaadida xusuusta, caafimaadka guud ee maskaxda iyo waliba howl maalmeedka. Dhibaatooyinkaan ee budada Palmitoylethanolamide ayaa la ogaaday 30 maalmood ka dib markii la kordhiyay waxayna kordheen in ka badan hal bil oo dheeri ah.
ii. Ka yaree xanuunka badan iyo Caabuqa
Saynisyahannadu waxay bixiyaan caddayn badan oo ah xanuunka palmitoylethanolamide ee xanuunka yareeysa guryaha. Xaqiiqdii, palmitoylethanolamide waxay bixisaa xanuun joojiye noocyo kala duwan oo xanuun iyo barar. Daraasadaha qaarkood oo muujinaya guryaha xanuunka loo yaqaan 'palmitoylethanolamide' ee xanuunnada xanuun joojintu waa;
Daraasad ku saabsan xayawaanka, dheeri ah Palmitoylethanolamide oo ay weheliso quercetin ayaa laga helay inay bixiso gargaar ka timaadda xanuunka wadajirka ah iyo sidoo kale hagaajinta wadajirka wadajirka ah iyo ka ilaalinta carjawda dhaawaca.
Daraasadaha horudhaca ah qaarkood waxay muujinayaan in PEA ay gacan ka geysan karto yareynta xanuunnada dareemeyaasha ee bukaanka sonkorowga qaba (diabetic neuropathy).
Daraasad kale oo lala sameeyay 12 qof, qiyaasta palmitoylethanolamide ee 300 iyo 1,200 mg / maalintii oo la siiyay qiyaastii 3 ilaa 8 toddobaad ayaa la ogaadey inay hoos u dhigeyso xoogeysiga xanuunka daba dheeraada iyo xanuunka neuropathic.
Daraasad lagu sameeyay 80 bukaan oo la xanuunsan cudurka 'Fibromyalgia syndrome' ayaa lagu ogaadey in PEA marka lagu daro daawooyinka kale ee xanuunku ay yareyn karaan xanuunka.
Dheeraad ah, daraasado kale oo badan ayaa muujinaya suurtagalnimada xanuun joojinta palmitoylethanolamide oo ay ka mid tahay ka bogsashada xanuunka miskaha, xanuunka sciatic, xanuunka dhabarka, xanuunka kansarka ee dadka kale.
iii. Waxay kaa caawinaysaa yareynta astaamaha niyadjabka
PEA waxay si aan toos ahayn u saameysaa soo dhaweynta mas'uulka ka ah dareenka. Daraasadaha qaarkood waxay muujiyaan daaweyn walaac ah Palmitoylethanolamide oo ah door muhiim ah oo lagula dagaallamayo niyad-jabka.
Daraasad lagu sameeyay 58 bukaan oo qaba niyad jab, palmitoylethanolamide dheeri ah oo ah 1200 mg / maalintii oo ay weheliso dawada lidka ku ah antidepressant (citalopram) oo la maamulo 6 usbuuc ayaa la ogaaday inay si weyn u hagaajineyso niyadda iyo astaamaha guud ee diiqadda.
iv. Waxay yareysaa hargabka caadiga ah
Palmitoylethanolamide waxay ka faa'iideysataa la dagaallanka beenta caanka ah ee awoodda ay u leedahay inay baabi'iso fayraska mas'uul ka ah hargabka caadiga ah (fayraska hargabka). Waxa la yaab leh, hargabka caadiga ahi wuxuu u dhacaa si ballaadhan wuxuuna u saameeyaa ku dhawaad ​​qofkasta gaar ahaan dadka leh kahortagga xasilloonida.
Daraasad la sameeyay 900 oo askari oo dhalinyaro ah ayaa muujisay in qiyaasta palmitoylethanolamide ee 1200 mg maalintii ay yareyso waqtigii ay ka qeybgalayaashu ka bogsan lahaayeen hargabka iyo waliba astaamaha sida madax xanuun, qandho iyo cuno xanuun.
v. Wuxuu yareeyaa astaamaha cudurka 'sclerosis' ee 'insular' (multiple) sclerosis)
Iyada oo la xaqiijiyey sifooyinka anti-bararka ee palmitoylethanolamide, shaki la'aan, PEA waxay shaki la'aan ku habboon tahay daaweynta cudurka sclerosis.
Daraasad lagu sameeyay 29 bukaan oo la xanuunsanaa cudurka 'sclerosis' oo badan, PEA ayaa lagu daray qiyaasta caadiga ah ee interferon IFN-β1a waxaa laga helay hoos u dhigga xanuunka sidoo kale waxay kor u qaadday tayada nolosha bukaannada.
vi. Palmitoylethanolamide wuxuu hagaajiyaa dheef-shiid kiimikaadka
Palmitoylethanolamide (PEA) wuxuu awood u leeyahay inuu ku xirnaado PPAR- α, qaabilaha mas'uulka ka ah dheef-shiid kiimikaadka, rabitaanka cuntada, miisaanka oo hoos u dhaca iyo dufanka gubanaya. Marka soo-dhaweynta PPAR-you ay kiciso waxaad la kulantaa heerar tamar sare leh oo ka caawiya jirka inuu gubo dufanka badan ee layliyo markaa miisaankaagu wuu dhacayaa.
vii. Palmitoylethanolamide waxay hoos u dhigi kartaa rabitaankaaga cuntada
Palmitoylethanolamide culeyska miisaanka luminta waxaa lagu muujiyaa awoodda uu u leeyahay inuu saameyn ku yeesho rabitaankaaga. Waxay lamid tahay kor u qaadida dheef-shiid kiimikaadka, marka PII- α receptor-ka uu shaqeymo waxay kuu horseedaa inaad dareentid buuxdo iyadoo cunista sidaas ay kugu caawinayso inaad xakameyso xaddiga kalooriyeyaasha la cuno.
Dheeraad ah, PEA waxaa loo arkaa aashitada ethanolamides acid ee door ka ciyaaraya dhaqanka quudinta. Daraasad lagu sameeyay jiirka xad dhaafka ah ee culeyska badan leh, kordhinta cuntada ee loo yaqaan 'PEA supplement' oo ah 30 mg / kg culeyska jirka muddo 5 asbuuc ah ayaa lagu ogaadey inay si weyn hoos ugu dhigeyso cunnadooda, dufanka badan iyo culeyska jirka.
viii. Palmitoylethanolamide saamaynta anti-bararka inta lagu jiro jimicsiga
Mid ayaa laga yaabaa inuu dareemo xanuun iyo caabuq inta lagu jiro iyo ka dib jimicsiga culeyska xad dhaafka ah awgeed. Hagaag, dheellitirka 'PEA' ayaa kaa caawin kara kahortagga tan iyada oo kicinaysa waxqabadka anti-bararka ee soo-dhawraha PPAR--. Palmitoylethanolamide sidoo kale waxay horjoogsan kartaa sii deynta enzymes bararka ku jira unugyada adipose aadanaha.
Ayaa ay tahay inuu qaato dheeri ah oo loo yaqaan 'Palmitoylethanolamide' (PEA)?
Kordhinta Palmitoylethanolamide (PEA) waxay ku habboon tahay dhammaan dhibaatooyinka ka yimaad xannuun daran ama caabuq iyo sidoo kale qof kasta oo xiiseeya miisaan lumis ha ahaato dawo ama ha qaadan. PEA ayaa loo arkay inay kor u qaadayso waxtarka dawooyinka kale. Waa ikhtiyaar loogu talagalay kuwa aan ka helin xasilooni adeegsiga dilaayaasha xanuunka loo qoray.
Palmitoylethanolamide gargaar welwel waa sifo heer sare ah qofkasta oo qatar ugu jira niyad jab ama qaba niyad jab waa inuu qaataa PEA.
Intaa waxaa sii dheer, mid ayaa ka goosan doona waxbadan oo ka mid ah "PEA" kaabayaasha ah maxaa yeelay soo-saareyaashu waxay raadsadaan qaabab kordhinaya palmitoylethanolamide bioavailability jirkaaga.
Maxay PEA ka soo baxday?
PEA waxaa si dabiici ah u soo saaray jirkeenna iyo sidoo kale xayawaanno iyo dhir. Si kastaba ha noqotee, dadka qaba xannuun joogto ah ama caabuq leh, PEA waxay ku dhacdaa qaddar aan ku filneyn sidaas awgeed baahida loo qabo supplements PEA.
Palmitoylethanolamide waxaa laga soo qaadan karaa ilaha cuntada ee hodanka ku ah borotiinada sida caanaha, hilibka, digirta soy, soy lecithin, looska iyo digirta beerta iyo kuwa kale. Si kastaba ha noqotee, PEA laga helay ilaha cuntada waa qadar yar. Tani waxay ka dhigaysaa wax soo saarka badan ee Palmitoylethanolamide mid lagama maarmaan u ah buuxinta baahiyahan cunto.
PEA miyuu kugu sarraysiiyaa?
Phenethylamine iyo Palmitoylethanolamide labaduba waxay wici karaan PEA, laakiin gabi ahaanba waa alaabooyin kala duwan.
Phenethylamine (PEA) waa unug dabiici ah, alkaloid dabiici ah monoamine, iyo raad amine, kaas oo u dhaqma sida habka dhexe ee neerfaha kiciya ee aadanaha. Phenethylamine waxay jirka ku kicisaa sameynta kiimikooyin gaar ah oo door ka ciyaara niyadjabka iyo xaaladaha kale ee maskaxda.
Qaadashada qiyaasta 500mg-1.5g halkii qiyaasta, dhowrkii saacadoodba, PEA waxay siisaa isticmaalaha dareen farxadeed, tamar, kicin, iyo guud ahaan ladnaan.
Si kastaba ha noqotee, fadlan si naxariis leh u fiirso in Phenethylamine (PEA) uusan ahayn Palmitoylethanolamide (PEA). Kordhinta Phenethylamine ma aysan ansixin FDA si loogu isticmaalo caafimaadka. Palmitoylethanolamide (PEA) waa walax dabiici ah oo jirku soo saaro; waa mid waxtar badan oo ammaan ah in loo isticmaalo kaabis ahaan xanuunka iyo caabuqa.
Ma PEA kabid amaan ah?
Palmitoylethanolamide (PEA) waa walax dabiici ah oo jirku soo saaro; waa mid waxtar badan oo ammaan ah in loo isticmaalo kaabis ahaan xanuunka iyo caabuqa. Ma jiraan wax saameyn ah oo daaha Palmitoylethanolamide oo la soo sheegay iyo sidoo kale isdhexgal aan wanaagsaneyn oo lala yeesho daawooyinka kale.
Waa maxay dhibaatooyinka soo raaca ee PEA?
Ma jiraan waxyeellooyin halis ah ama isdhexgalka daroogada-daroogada ayaa la soo sheegay ilaa hadda. Palmitoylethanolamide waa lala qaadan karaa walax kasta oo kale. Waxay kor u qaadeysaa saameynta xannuun-yareynta ee xanuunka 'analgesics' iyo anti-inflammatory.
Palmitoylethanolamide miyuu badbaado uur leeyahay?
Looma isticmaali karo haweenka uurka leh.
Palmitoylethanolamide waxay kaa caawin kartaa nafaqeynta wax ka qabashada bararka iyo xanuunka daba dheeraada.
Waa in lagu qaataa oo keliya kormeerka caafimaadka.
Palmitoylethanolamide nolosha badh - Muddo intee le'eg ayay qaadataa in digirku shaqeeyo?
Palmitoylethanolamide (PEA) ayaa lala qaadan karaa dawooyinka kale ee xanuunka ama kaligood, sida uu kugula taliyay xirfadlahaaga daryeelka caafimaadka, si loo taageero xanuunka yareeya.
Waxtarka u leh xanuun joojintu waa 8 saac
Natiijooyinka isbeddelaya; natiijooyinka 48 saac gudahood dadka qaar, laakiin u isticmaal toddobaadyada 8 natiijooyinka ugu badan, waxaa loo isticmaali karaa muddo dheer xanuunka dareemayaasha ee joogtada ah.
Sidee ayuu PEA ugu shaqeeyaa xanuunka?
Cilmi baaris ayaa muujisay in PEA ay leedahay astaamo anti-bararka iyo anti-nociceptive oo si joogto ah loo qaato waxay kor u qaadi kartaa jawaabta dabiiciga ah ee jirka ee xanuunka iyadoo la yareynayo jawaabta unugyada nidaamka dareenka ee xanuunka keena.
Palmitoylethanolamide sidoo kale wuxuu u shaqeeyaa si aan toos ahayn si uu u kiciyo waxqabadyada qaar ka mid ah kuwa wax qabta sida kuwa wax soo raaca ee cannabinoid. PEA waxay si aan toos ahayn u kicineysaa soo-saareyaasha cannabinoid (CB1 iyo CB2) adoo u dhaqmaya sida enzyme (FAAH -fatty acid amide hydrolase) oo ku lug leh burburka cannabinoid anandamide. Tani waxay ka caawineysaa kor u qaadista heerarka anandamide ee jirkeena, taas oo mas'uul ka ah nasashada iyo la dagaallanka xanuunka.
Waa maxay PEA xanuun joojiyaha?
Palmitoylethanolamide (PEA) waa walax dabiici ah oo jirku soo saaro; waa amide acid fido endogenous ah, oo ka tirsan fasalka agonists factor factor, waxaana loo isticmaali karaa kaabis ahaan xanuunka iyo daaweynta caabuqa. PEA waa dabiici, ilaalin, molecule dufan leh oo lagu soo saaray jirkeena, ka caawinta taageerida guntimaha dareemayaasha myelin si ay u shaqeyso neerfaha wanaagsan.
PEA waa asiidh dufan ah oo ku lug leh shaqooyinka kala duwan ee gacanta ee caabuqa iyo xanuunka daba dheeraada, waxaana lagu muujiyey inuu leeyahay neuroprotective, anti-inflammatory, anti-nociceptive (anti-pain) iyo anti-convulsant properties. Waxay sidoo kale yareyneysaa dhaqdhaqaaqa caloosha iyo faafin unugyada kansarka, iyo sidoo kale ilaalinta endothelium-ka xididdada dhiigga ku jira ee wadnaha ischemic. Badanaa dadka qaba jirrooyinka daba dheeraada, jidhku ma soo saaro PEA ku filan, sidaa awgeed qaadashada PEA si loogu kabo jidhka oo yaraada waxaa laga yaabaa inuu faa'iido u leeyahay caawinta daaweynta xaaladahaas.
Miyuu digirku yahay anti inflammatory?
Palmitoylethanolamide (PEA) waa shey xiiso leh oo kahortaga bararka iyo daaweynta sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu qabto balanqaad weyn oo ku saabsan daaweynta tiro ka mid ah (auto) xanuunada difaaca jirka, oo ay ku jiraan cudurada caloosha ee caabuqa iyo cudurada caabuqa ee CNS.
Digirtu miyuu ku fiican yahay arthritis-ka?
Palmitoylethanolamide (PEA) wuxuu siiyaa faa iidada arthritis-ka labadaba marka laga hadlayo yareynta horumarka iyo dayactirka xanuunka daba dheeraaday laakiin sidoo kale waxay gacan ka geysaneysaa yareynta horumarka burburka wadajirka ah ee la xiriira arthritis-ka.
Maxay yihiin xanuun baabi’iyeyaasha ugu fiican ee xanuunka dareemayaasha?
PEA (palmitoylethanolamide) wuxuu jiray ilaa 1970-yadii laakiin wuxuu ku helayaa sumcad wakiil cusub daaweynta daweynta iyo xanuunka. Ma jiro isdhexgal daroogo ama waxyeelo halis ah oo la aqoonsaday.
PEA waxay muujisay waxtarka xanuunka daba dheeraada ee noocyo badan oo laxiriira xaalado badan oo xanuun badan, gaar ahaan xanuunka neuropathic (neerfaha), xanuunka caabuqa iyo xanuunka uurjiifka sida endometriosis iyo cystitis interstitial.
Sideen ugu daaweyn karaa xanuunka neerfaha guriga?
PEA waa molecule dufan oo gacan ka geysata taageerida guntimaha dareemayaasha myelin si ay u shaqeyso neerfaha wanaagsan.
Yaraanta fiitamiinada kooxda B ma sababi karto oo keliya neerfaha xanuun, laakiin sidoo kale way kordhisaa.
Astaamo dheeraad ah oo aan fiicnayn ayaa sidoo kale dhici kara, sida socodka oogada, xanaaqa iyo xodxodashada gacmaha iyo cagaha, dareen ah in qofku ku socdo silig dunsan ama suuf ama xitaa kabuubyo
gacmaha iyo cagaha.
Fiitamiin B1 aad u yar wuxuu u horseedaa khalkhal ku dhaca shaqeynta neerfaha sidaas darteedna neuropathy iyo neerfa xanuun. Markaad kudareyso fitamiin B1, xanuunku wuu yaraadaa shaqada neerfaha ayaa wanaagsanaata. Faytamiin B1 waa lala wadaagi karaa PEA, tani waxay siisaa taageero ugufiican shaqada neerfaha, waxay kahortagtaa xanuunka neerfaha ama xanuun sii xumaanaya. Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujiyeen in dad badan oo qaba xanuun joogto ah, dadka waayeelka ah iyo dadka sonkorowga qaba ay ku filan yihiin fitamiinadan dhiigooda. Tani waa mid ka mid ah sababaha aan dadkaas loogu daaweyn karin oo keliya xanuun baabi’iyeyaasha; waxay u baahan yihiin
intaas kabadan. Fiitamiinada 'PEA plus B' waxay taageertaa habdhiska neerfaha iyo difaaca jirka xaaladaha xanuunka dareemayaasha.
Palmitoylethanolamide ma yahay cannabinoid?
CBD (Cannabidiol) waa xeryo laga soo saarey hemp iyo marijuana. In kasta oo jirku si dabiici ah u soo saaro cannabinoids, CBD-da ayaa lagu kabay si ay u buuxiso baahiyaha.
Cannabinoids waa kiimikada firfircoon ee noolaha ee jirka lagu soo saaray oo mas'uul ka ah xusuusta, xanuunka, rabitaanka cuntada, iyo dhaqdhaqaaqa. Saynisyahanada ayaa sheegaya in cannabinoids ay faa'iido u leedahay yareynta caabuqa iyo walwalka, burburinta unugyada kansarka, bixinta muruqyada nasashada iyo sidoo kale waxay kordhisaa rabitaanka cuntada.
PEA waa maadada loo yaqaan 'Acid acid amide acids' oo sidoo kale lagu soo saaro jirka waxaana looyaqaan karaa cannabimimetic. Tani waxay ka dhigan tahay inay la mid tahay shaqooyinka jirka ee CBD.
Labadaba CBD iyo PEA waxay u dhaqmaan si aan toos ahayn iyagoo xakameynaya dufanka asiidh amide hydrolase (FAAH), oo badanaa burburiya anandamide oo daciifiya. Tani waxay keenaysaa heerar sare oo anandamide ah. Anandamide wuxuu door weyn ka ciyaaraa niyadda iyo waliba dhiirigelinta. Heerarka kordhay ee anandamide ayaa si togan u saameeya nidaamka endocannabinoid.
PEA waxay heshay sumcad waxayna la tartamaysaa CBD. PEA waxaa loo qaddariyo inay tahay bedel badbaado u leh CBD sababa la xiriira arrimaha sharciga ee haysta iyo sidoo kale xaqiiqda ah in dadka intooda badani aysan u dulqaadan karin heerarka sare ee 'dhagaxa' ee la yimaada CBD.
Dheeraad ah, PEA aad ayuu uga jaban yahay CBD. Si kastaba ha noqotee, PEA waxaa loo isticmaali karaa marka lagu daro CBD si loo gaaro saameyn isku dhafan.
Miyuu digirku yahay endocannabinoid?
MAYA, Palmitoylethanolamide (PEA) waa dhexdhexaadiye u eg endocannabinoid lipid oo leh sifooyin xanuun iyo anti-bararka. PEA waxay taageertaa ECS iyada oo loo marayo hagaajinta calaamadaha endocannabinoid iyo si aan toos ahayn u dhaqdhaqaaqa firfircoonida cannabinoid.
Nidaamka endocannabinoid (ECS) waa nidaam bayooloji muhiim ah oo nidaamiya iskuna dheellitira shaqooyin fara badan oo jidheed oo jidhka ah. Cilmi-baarista ku saabsan ECS waxay horseedday aqoonsiga oo keliya endocannabinoids sida anandamide (AEA) iyo 2-arachidonoylglycerol (2-AG), laakiin sidoo kale dhexdhexaadiyeyaasha lipid-sida endocannabinoid sida Palmitoylethanolamide (PEA). Kuwani xeryahooda u eg-endocannabinoid-ka waxay inta badan wadaagaan isla dariiqooyinka dheef-shiid kiimikaadka ee endocannabinoids laakiin iskuma xirnaansho la'aanta nooca caadiga ah ee soo qabashada Cannabinoid 1 iyo nooca 2 (CB1 iyo CB2).
Palmitoylethanolamide (PEA) iyo Anandamide
Palmitoylethanolamide iyo anandamide si dhaw ayey iskugu dhawyihiin maadama ay labadaba jirka ku jiraan sunta aashitada dufan leh.
PEA iyo anandamide ayaa la sheegay inay leeyihiin saameyn isku dhafan ee daaweynta xanuunka sidoo kale waxay xoojinayaan dilaaga xanuunka loo isticmaalo.
Waxa kale oo u jajabiyaa enzyme-ka hydrolase-ka ee jirka ku jira, sidaa daraadeed saameynta ay gaaraan marka si wada jir ah loo isticmaalo ayaa ka badan marka loo adeegsado dheellitirka adag.
Phenethylamine waa walax kiimiko ah oo si dabiici ah jirku u soo saaray. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa kor u qaadida waxqabadka cayaaraha waxayna sidoo kale kaa caawin kartaa yareynta niyad-jabka, kaalmaynta miisaanka oo yaraada iyo xoojinta niyadda.
Palmitoylethanolamide dhinaca kale waa amide acid amide oo inta badan caan ku ah xanuunka iyo kahortaga caabuqa.
Labadan xeryood wax xiriir ah lama lihi. Waxa kaliya ee isku xira waa in labadoodaba loo soo gaabiyo 'PEA'.
Sideen u qaataa kordhinta Palmitoylethanolamide (PEA)?
In kasta oo aan carrabka ku adkeynay faa'iidooyinka ka hortagga bararka ee loo yaqaan 'palmitoylethanolamide' ee ka faa'iideysanaya faa'iidooyinka kale, waxaa mudan in aan adiga kuu soo qaadno xaqiiqooyin badan oo ku saabsan PEA. PEA waxay ku dhacdaa maadooyin waaween oo aan biyo laheeyn, tani waxay ka dhigaysaa palmitoylethanolamide bioav wiwa iyo soo nuugista xaddidan.
Akhbaarta wanaagsan, si kastaba ha noqotee, waxay tahay in soosaarayaashu ay bartilmaameedsadaan qaabab kor u qaadaya bioavide bioavide u leh isticmaalka ugu badan jirkaaga. Kuwaas, Budada PEA waxaa lagu heli karaa qaabka budada caadiga ah iyo foomka budada mikromized.
Xagee laga iibsadaa budada Palmitoylethanolamide (PEA)?
Waxaan ku jirnaa xilli xiise leh oo dukaamada internetka ay noqdeen hal dukaan lagu istaago wax kasta oo ay ku jiraan alaabada badan ee Palmitoylethanolamide. Haddii aad ka fiirsanaysid qaadashada PEA, cilmi baaris ballaaran ugu samee sharci-dejiyeyaasha wax soo saarka bulukeetigaylethanolamide. Inta badan isticmaalayaasha Palmitoylethanolamide waxay ka iibsadaan dukaamada internetka waana inay tixgeliyaan dib u eegiddooda ku saabsan budada PEA ee ugu fiican suuqa.
CB1: Cannabinoid nooca I receptor
CB2: Cannabinoid nooca II receptor
DHEXE: Diiwaanka Dhexe ee Cochrane ee Tijaabooyinka La Xakumay
NAAA: N-acylethanolamine hydrolyzing acid acidsase oo loo yaqaan 'acidasease'
PPARy: Daawada loo yaqaan 'peroxisome proliferator-activated alpha receptor alpha'
PRISMA-P: Waxyaabaha Warbixinta La Doorbiday ee Dib-u-eegista Habaysan iyo Hab-maamuuska Falanqaynta Meta
VAS Xanuun: Qiyaasta Muuqaalka Analog ee Xanuunka
ECS: nidaamka endocannabinoid
 Artukoglu BB, Beyer C, Zuloff-Shani A, iyo al. Waxtarka Palmitoylethanolamide ee xanuunka: falanqaynta maadada. Dhakhtarka Xanuunka 2017; 20 (5): 353-362.
 Schifilliti C, Cucinotta L, Fedele V, iyo al. Micronized Palmitoylethanolamide wuxuu yareeyaa astaamaha xanuunka neuropathic ee bukaanka sonkorowga qaba. Daaweynta Xanuunka 2014; 2014: 849623.
 Keppel Hasselink JM, Hekker TA. Waxtarka daaweynta ee Palmitoylethanolamide ee daaweynta xanuunka neuropathic ee la xiriira xaaladaha cudurada kala duwan: kiis taxane ah. J Xanuun Res 2012; 5: 437-442.
 Keppel Hasselink JM, Kopsky DJ. Doorka Palmitoylethanolamide, autacoid, daaweynta astaamaha xanuunka murqaha: seddex warbixinood oo kiis iyo dib u eegis suugaaneed. J Clin Case Rep 2016; 6 (3).
 Costa B, Colombo A, Bettoni I, Bresciani E, Torsello A, Comelli F. Dhiigga ligand palmitoylethanolamide wuxuu yareeyaa xanuunka neuropathic iyada oo loo marayo unugyada mastarada iyo habka microglia. Shirka sanadlaha ee 21aad ee Ururka Cilmi-baarista Caalamiga ee Cannabinoid. St. Charles, Il. Usa: Orod Faneed; 2011.
Guudmarka 1.Palmitoylethanolamide (PEA)
2.Waa maxay Palmitoylethanolamide (PEA)?
3.Palmitoylethanolamide dheefaha - Maxaa loo adeegsadaa Palmitoylethanolamide?
4.Yuu qaadanayaa dheeri ah 'Palmitoylethanolamide' (PEA)?
5.Sidee ayuu PEA ugu shaqeeyaa xanuunka?
6.Ma Palmitoylethanolamide waa cannabinoid?
7. Sideen u qaataa kordhinta Palmitoylethanolamide (PEA)?